यस्तो छ नेपाल बैंकको आक्रामक सुधार रणनीति Bizshala -
काठमाण्डौ । सरकारको ६२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको नेपालकै पहिलो बैंक ‘नेपाल बैंक लिमीटेड’ पछिल्लो कालमा तीव्र गतिमा सुधारको बाटोमा छ ।
बैंक नेतृत्व आफ्नो बित्तीय अवस्थामा आमूल सुधार र राष्ट्रबैंकले तोकेको ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनका लागि आक्रामक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।
सरकारी लगानी भएर पनि चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा समस्याग्रस्त बनेको र ३ अर्ब बढी नोक्सानीमा रहेको बैंकको नेतृत्वमा देवेन्द्रप्रताप शाह पुगेपछि उनको सुधार रणनीतिले सुखद परिणामसहित आक्रामक रुप समेत लिएको छ । शाह नेतृत्वको टिमले यसै वर्ष राष्ट्रबैंकले तोकेको ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने र केही महिनाभित्रै नोक्सानीलाई शून्यमा झारी समस्याग्रस्त बैंकलाई वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिस्पर्धामा अग्रपंक्तिमा ल्याउने रणनीतिसहित काम गरिरहेको छ ।
यही क्रममा नेपाल बैंक लिमीटेडले बुधबार आगामी जेठ अन्तिम साता साधारणसभा हुने सूचना निकाल्दै सो साधारणसभामा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ५६ औं साधरणसभाका लागि बुधवार एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै यसै वर्ष चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउन एकसय कित्ता बराबर २३.७४ को दरले हकप्रद शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सीइओ देवेन्द्रप्रताप शाहका अनुसार बैंकसँग अहिले ६ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी छ । हकप्रदबाट बैंकले एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थप पुँजी जुटाउने छ । यस अघि पनि बैंकले हकप्रदबाट पुँजी वृद्धि गरेको थियो ।
एनआइडीसी गाभ्न वा मर्जका लागि मार्गप्रशस्त
बैंकलाई मजबुत बनाउन र अन्य वाणिज्य बैंकको प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने उद्देश्यले नेपाल बैंक लिमीटेडले ९९.२ प्रतिशत सरकारी शेयर स्वामित्व रहेको एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई आफूमा गाभ्ने वा मर्ज गर्ने प्रस्ताव संचालक समितिको बैठकले पारित गरेको थियो । नेपाल बैंक लिमीटेडको करिब दुई साताअघि बसेको संचालक समिति बैठकले एनआइडीसीलाई ‘अक्वायर’ वा मर्ज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यही प्रस्तावलाई मूर्त रुप दिन र एनआइडीसीलाई गाभ्ने वा मर्जरका लागि भइरहेको गृहकार्यलाई सफल पार्न बैंकले मर्जर, एक्वीजीशन, टेकओभर तथा रणनीतिक साझेदार थप्नका लागि सञ्चालक समितिमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव पनि साधरणसभामा ल्याएको छ ।
बैंक उच्च स्रोतका अनुसार संचालक समितिबाट पारित एनआइडीसीलाई अक्वाएर गर्ने वा मर्जमा जाने प्रस्तावमा गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले हरियो झण्डा देखाएका छन् । यो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ, सरकारी निर्णय आउन बाँकी छ ।
नेपाल बैंक लिमीटेडको चुक्तापँुजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले देशभरका १ सय २६ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेको छ । बैंकमा हाल २ हजार ६ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्तापूँजी ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर करिब ३ अर्ब रुपियाँको रिजर्ब छ । देशभर ५ वटा शाखा अन्तर्गत बैकिङ सेवा दिइरहेको यो बैंकमा सरकारको ९९.२ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.७४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । सानो, तर मजबुत बैंकमा ४० स्थायी र ३५ अस्थायी कर्मचारी छन् ।
सुधारका लागि यो सक्रियता
सीइओ देवेन्द्रप्रताप शाह
देवेन्द्रप्रताप शाह सीइओको रुपमा नेपाल बैंक लिमीटेडमा प्रवेश गरेपछि यसले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिरहेको छ । शाह आउनुअघि बैंकको क्यापिटल रेसियो(पूँजी अनुपात) समेत निकै कम थियो । तर उनी आएपछि हाल बैंकको पूँजी अनुपात ९ माथि उक्लिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको आवश्यक न्यूनतम पूँजी अनुपात १० हो ।
बैंक स्रोतका अनुसार आन्तरिक रुपमा कमजोर नेपाल बैंकमा रहेको माइनस रिजर्बलाई प्लस बनाउनका लागि जग्गाजमीन र क्रस होल्डिङमा रहेका विभिन्न कम्पनीको शेयर बिक्रीको क्रम सुरु गरिएको छ । हाल यो बैंक १ अर्ब ५४ करोड नोक्सानीमा छ । शाह आउनुअघि त बैंकको नोक्सानी ३ अर्ब माथि थियो । उनले निकै कडा मेहेनतका साथ ३ अर्बको नोक्सानीलाई १ अर्ब ५४ करोडमा झारेका हुन् ।
बैंकको नोक्सानी घटाउनैका लागि नेपाल इन्स्योरेन्समा बैंकले होल्ड गरेको ५० प्रतिशत शेयरमध्ये करिब ३५ प्रतिशत अर्थात १० लाख कित्ता शेयर बिक्रीका लागि बैंकले सूचना नै प्रकाशित गरिसकेको छ । न्यूनतम प्रति कित्ता ४ सय रुपैयाँ नघट्ने गरी शेयर खरीदका लागि टेण्डर हाल्न बैंकले सूचना जारी गरेको छ । यी शेयर बिक्रीबाट ५० करोड भन्दा बढी प्राप्त हुनेछ ।
नेपाल बैंक लिमीटेडले हाल रहेको नोक्सानलाई शून्यमा झार्ने प्रयास अनुरुप तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ७ लाख कित्ता शेयर खुल्ला बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने घोषणासहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बैंकको व्यवस्थापन सेवा विभागका अनुसार प्रतिकित्ता शेयरको न्यूनतम २ सय रुपैयाँमा बोलकबोल गराएर बिक्री गर्न लागिएको हो । हाल यो होटलको शेयर प्रतिकित्ता २ सय ६० रुपैयाँको आसपासमा छ । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमीटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिएको र ७ लाख कित्ता शेयरबाट न्यूनतम १४ करोड आम्दानी हुने बैंकले जनाएको छ ।
यो शेयरका लागि पेश ग।िएको शिलबन्दी आवेदन जेठ ९ गते आइतबार अपरान्ह ३ बजेभित्र बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमीटेडको अनामनगरस्थित हनुमानस्थान भवनमा रहेको मर्चेन्ट बैकिङ कार्यालयमा दर्ता भइसक्नुपर्ने बताइएको छ । बोलपत्र चाहि जेठ १० गते खोलिने बताइएको छ । होटल स्थापना गर्दा दिएको कर्जालाई बैंकहरुले सेयर परिणत गरेर बैंकहरु तारागाउँ रिजेन्सी होटलका सेयरधनी भएका थिए । यसअघि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।
उता, बैंकले नागरिक लगानी कोषमा रहेको करिब एक अर्बको शेयर बिक्रीका लागि समेत आफ्नो तर्फबाट काम सकेर सरकार तथा कोषलाई अनुरोध गरिसकेको छ । तर सरकार र कोषले निर्णयमा ढिलाई गरिदिंदा ती शेयर बिक्रीको बाटो अझै खुलेको छैन ।
बैंकको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा समेत करिब ७० करोड रुपैयाँको शेयर छ । तर त्यहाँ पनि प्रक्रियागत अप्ठ्यारोका कारण भनेको समयमा(तत्काल) त्यो शेयर बिक्री हुने संभावना छैन । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको नियमावलीमा संस्थाको पहिलो साधारणसभा नभई शेयर बिक्री गर्न पाइदैन भन्ने बुँदा रहेको र कम्पनीको हालसम्म साधारणसभा नै नभएकाले आफूहरुले होल्ड गरेको शेयर बिक्री गर्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । बैंकले माइनस रिजर्बमा सुधार गर्नैका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका बैंकका जग्गाहरुको बिक्रीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ र दैनिकजसो त्यस्तो जग्गा बिक्रीका सूचनाहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । यसबाट समेत बैंकको नोक्सानी शून्यमा झार्न र बित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न बैंक नेतृत्व कतिसम्म सक्रिय छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
नाफामा ३५५ प्रतिशतको वृद्धि !
नेपाल बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफामा ३५५.४८ प्रतिशतको पत्याउनै नसकिने प्रगति हासिल गरेको छ ।
बैंकले बुधबार जारी गरेको बित्तीय विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आबको यही अवधिमा बैंकको नाफा ३६ करोड ६ लाखमा सीमित थियो । नेपाल बैंकले विभिन्न सम्पत्तिहरु बिक्री गरेर यो प्रगति हासिल गरेको हो ।
बैंकले चालु आबमा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खूद ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २ अर्ब २० करोड मात्र थियो । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा आइपुग्दा बैंकको नेगेटिभ रिजर्ब ९४ करोड ९० लाखमा आइपुगेको छ ।
बैंकले यो वर्ष ८२ अर्ब ६३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ, अघिल्लो वर्ष ६८ अर्ब ६९ करोड मात्र निक्षेप संकलन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ४९ अर्ब ५८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले यो वर्ष ५९ अर्ब ८२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
४.४८ प्रतिशत रहेको निस्क्रिय कर्जा दरलाई बैंकले ३.६७ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ३३.८८ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ ८५.३२ रुपैयाँ पुगेको छ ।